६५ औं विश्व कुष्ठरोग दिवस : बागलुङ जिल्लामा ९ जना कुष्ठरोगी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ! – ebaglung.com
२०७४ माघ १४, आईतवार १८:०३	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७४ माघ १४ । बागलुङ जिल्लामा ९ जना कुष्ठरोगी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । ६५ औ विश्व कुष्ठरोग दिवसका अवसरमा बागलुङमा एक बालक सहित ९ जनामा कुष्ठरोगको जीवाणु फेला परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले जानकारी दिएको छ । सन् २०१० मा नेपाल सरकारले कुष्ठरोग उन्मूलनको घोषणा गरेको थियो तर पछिल्लो समय नेपालमा वर्षेनी ३ हजारको संख्यामा कुष्टरोगीहरु बढ्ने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
एक १४ बर्षिय बालक सहित ९ जनालाई कुष्ठरोगको औषधी सेवन गराईरहेको धौलागिरी अंचल अस्पताल बागलुङका सुपरिटेण्डेन डाक्टर सागर राजभण्डारीले जानकारी दिए । डा राजभण्डारीका अनुसार समाजमा भेदभाव र लाञ्छनाका कारण रोग लुकाउने बानी परेपनि पछिल्लो समय चेतना र शिक्षाका कारण रोगीहरु खुलेर उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने गरेका छन ।
कुष्ठरोगीको संख्या पहिलेको जस्तो भयावह छैन डा. राजभण्डारीले भने, न्युन भएका कुष्ठरोगीको संख्यालाई शुन्यमा पुर्याउनका लागि सबैको साझा पहल र प्रयत्न आवश्यक छ ।
सो अवसरमा कार्यक्रम बारे सहजिकरण गर्दै खोप सुपरभाईजर देब प्रकाश घिमिरेले जिल्लाको बिनमारे हुग्दीशिर गल्कोट हटिया पाला बिहुं लगायतका क्षेत्रका गरी ९ जना कुष्ठरोगीले कुष्ठरोग बिरुद्धको औषधी सेवन गरिरहेको जानकारी दिए । उनंले कुष्ठरोगको औषधी सेवन गर्दासाथ एकबाट अर्को ब्यक्तिमा रोग नसर्ने बताए । कुष्ठरोग सरुवा रोग भएपनि एक मात्र औषधी सेवन गर्दासाथ अर्को ब्यक्तिमा सर्न सक्दैन, यो रोग नियमित औषधी सेवनले पुर्णरुपमा निको हुने रोग हो, उनको भनाई थियो । घिमिरेले कुष्ठरोग एक बाट अर्को ब्यक्तिमा सर्छ र निको हुदैन भन्नेबारे समाजमा चेतना जगाउन जरुरी रहेको बताए । उनले प्रदेश नम्वर ४ का सबै जिल्लाहरु भन्दा बागलुङमा कम कुष्ठरोगीको संख्या रहेको समेत जानकारी दिए ।
कुष्ठरोग माईको ब्याक्टेरियम लेप्रे नामक जिवाणुबाट सर्ने गर्दछ । यो रोगले छाला स्नायुमा क्षेती पुर्याउछ । शरीरमा नचिलाउने रातो तथा फुस्रो दाग देखा परेमा, हातखुट्टा झमझभएमा, कानको लोती बाक्लो हुनु, शरीरका बिभिन्न भागमा गीर्खा देखापर्नु हात खुट्टामा नदुख्ने खालका घाउ खटिरा देखा पर्नु कुष्ठरोगको लक्षण हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
यस्ता लक्षणहरु देखा परेमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा चेकजाच गराएर औषधी सेवन गर्नुपर्ने बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक प्रसाद तिवारीले जानकारी दिए । तिवारीका अनुसार कुष्ठरोग बिरुद्धको औषधी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क रुपमा उपलब्ध छ । अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको सहजिकरण बागलुङ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. राजभण्डारी, बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत तिवारी र खोप सुपरभाईजर घिमिरे लगायतले गरेका थिए ।
सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासघं बागलुङका अध्यक्ष दिल शिरिषले मन्तब्य ब्यक्त गरेका थिए ।
खानेपानी टंकीमा खसेर गम्भीर बनेकी दश वर्षिया बालिकाको निधन